Tonga vadin'ny mpitarika ny lozam-pifamoivoizana iray aho - vakio Manhwa, Manhua, Webtoon, Webcomics, Manga, Comics an-tserasera
Tonga vadin'ny mpitarika ny lozam-pifamoivoizana aho Average 3.4 / 5 avy amin'ny 26
N / A, manana fomba fijery 23K
tantara an-tsary, tantara an-tsehatra, Fantasy, Manhwa, Romance, Shoujo, Webtoons
Vakiana ianao Tonga vadin'ny mpitarika ny lozam-pifamoivoizana aho, mahafinaritra manhwa.
Nipetraka irery toy ny andriambavy nilaozan'ny fanjakan'ny Anzak, hitako fa tao amin'ny tantara fako iray hita tamin'ny nofiko indray andro izay. Ny zokiko vavy iray vavy no maherifon'ilay tantara an-tsarimihetsika, ary ny firaka lahy dia fantatry ny olona masiaka sy tsy manam-po. Extra fotsiny aho izay maty talohan'ny nanombohan'ny tantara an-tsehatra rehetra. Namidy ho toeram-pialofana ho an'ny fifanarahana fandriam-pahalemana an'ny Empira Halvenkia, voatendry ho faty aho, tsy afa-nandositra ny anjarako. “Izaho irery no lehilahy any Halvenkia izay mbola mpitovo. Tsy tianao ve aho? ” Fa tampoka teo dia te hanambady ahy ny mpilalao sarimihetsika. Ny fitiavanao voalohany, ny fanorohana voalohany, ary ny filomanosanao voalohany dia miaraka amin'ilay heroine avokoa, saingy azoko atao ve ny mandray azy rehetra ho ahy? Alexia, sahirana manova ny tantara mba ho tafavoaka velona. Tervion, te hihazona azy rehetra ho azy. Ary i Ophelia, ilay maherifo tsy fantatra. Ny tantara tany am-boalohany dia nanomboka nivezivezy tamin'ny lalana hafa tanteraka. Fantatra tantaram-pitiavana izay manarona ny nofin'i Alexia sy Tervion sy ny nofinofiny, satria izy ireo ihany no hitan'izy ireo.
Chapter 37	Novambra 15, 2021
Chapter 35	Novambra 15, 2021
Chapter 34	Novambra 15, 2021
Chapter 33	Novambra 15, 2021
Chapter 32	Novambra 15, 2021
Chapter 30	Novambra 15, 2021
Chapter 29	Novambra 15, 2021
Chapter 28	Novambra 14, 2021
Chapter 27	Novambra 14, 2021
Chapter 26	Novambra 14, 2021
Chapter 25	Novambra 15, 2021
Chapter 24	Novambra 14, 2021
Chapter 22	Novambra 14, 2021
Chapter 21	Septambra 25, 2021
Chapter 20	Septambra 25, 2021
Chapter 19	Septambra 25, 2021
Chapter 18	Septambra 25, 2021
Chapter 17	Septambra 25, 2021
Chapter 16	Aogositra 14, 2021
Chapter 15	Jolay 28, 2021
Chapter 14	Jolay 2, 2021
Chapter 13	Jolay 2, 2021
Chapter 12	Jona 13, 2021
Chapter 11	Jona 7, 2021
Chapter 10	Jona 5, 2021
Chapter 9	Enga anie 18, 2021
Chapter 8	Enga anie 18, 2021
Chapter 7	Enga anie 13, 2021
Chapter 6	Enga anie 13, 2021
Chapter 5	Aprily 30, 2021
Chapter 4	Aprily 30, 2021
Chapter 3	Aprily 28, 2021
Chapter 2	Aprily 28, 2021
Chapter 1	Aprily 28, 2021
Ny andro voalohany nihaonantsika
Tena tsy azo averina?
Ny zanakavavin'ny Element King